Mandalay FM Morning Show for(11.8.2015) [Tuesday] | Mandalay FM Radio
Mandalay FM Morning Show for(11.8.2015) [Tuesday]
မင်္ဂလာရှိလှတဲ့ အင်္ဂါနေ့ လေးပါရှင့်....
Mandalay FM နံနက်ခင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ 11.8.2015 (အင်္ဂါနေ့) နံနက်မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာကသတင်းတွေနဲ့အတူ မနက် ၆ နာရီခွဲမှာ နားဆင်တဲ့သောတရှင်တွေ အတွက် ကျန်းမာသန့် ရှင်းတဲ့
အိမ်ကလေး ဖြစ်စေ ဖို့နည်းလမ်းကောင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် တင်ဆက်ပေးသွား ဖြစ် ပြီး ၇ နာရီခွဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ အချိန်နဲ့တပြေးညီယာဉ်လမ်းကြောသတင်းတွေ၊နဲ့ အတူ Mandalay FM သောတရှင် တွေလည်း ပါဝင်နိုင်တဲ့ အစီအစဉ်မှာတော့ ဘ၀ မှာ
မှတ်မှတ် ရရ ကြုံ တွေ့ ခဲ့ ရ တဲ့ အခက်အခဲ တွေ ရှိပါသလား.? အဲ့ ဒီ အခက် အခဲ တွေကို ကျော် ဖြတ် နိုင် ခဲ့ လား?? ဘယ် လိုကျော် ဖြတ် ခဲ့ ရ လဲဆိုတာကို သောတရှင်တွေအနေနဲ့ ဝေမျှ ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Mandalay FM ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့
01 - 501709 ကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ ဝေ မျှ ပေး နိုင်သလို Mandalay FM ရဲ့ Facebook Page မှာလည်း comment လေးတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးသားပြီးတော့ ဝေမျှနိုင်ပါတယ်။
မနက် ၁၀နာရီကနေ၁၁နာရီအတွင်း Life Style အစီအစဉ်မှာ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ သရုပ်ဆောင် ကိုဖိုးသောကြာဖိတ်ခေါ် ထားပြီးတော့ သူ ရဲ့ လတ်တလော လုပ် ဖြစ်နေတဲ့ ပရဟိတလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အနုပညာ လှုပ် ရှား မှုတွေအပြင်
အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ နားဆင်အားပေးပါအုံးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်.........